Jaamacada Gadareif Oo Wacdaro Ku Dhigtay Jaamacada Bahri Kulankii Daah Furka Koobka Jaamacadaha Sudan +SAWIRRO – Gool FM
Jaamacada Gadareif Oo Wacdaro Ku Dhigtay Jaamacada Bahri Kulankii Daah Furka Koobka Jaamacadaha Sudan +SAWIRRO
Liibaan Fantastic August 27, 2017
(Khartoum) 27 Agoosto 2017 Koobka ay sanad kastaahi soo abaabulaan Golaha Ardayda Qaranka Soomaaliyeed Ee Dalka Sudan ayaa cawa ka bilaambay Gegida Kheyma Ee Caasimada Seddex xagalka Khartoum, koobkaani oo loo qabto ardayda wax ka barata Jaamacadaha kala duwan Ee dalkan Sudan.
Koobka waxa kalmad kooban ku daah furay Gudomiyahi hore ardayda qaranka Abdirizak Alxajari iyo xogahaya isboortiga Akram Hajji, sido kale waxa kalmad sharaf lagu maamusayo koobka laguna taagerayo is dhexgalka ardayda ka jeediyay garoonka Gudomiyaha Ardayda Qaranka Max’ed C/qani.
Intaa kadib arbitaha ciyaarta ayaa seeriga ku dhuftay kulan la wada sugayay oo taageero fara badani u soo daawasho tageen kuwaa oo ka kala yimi xaafadaha Khartom iyo Gobolada ku dhow dhow.
Jaamacada Bahri ayaa gool ku daah furtay bilowgii ciyaarta oo uu u dhaliyay weeraryahankooda Saacid, wax badan kama soo wareegan goolki Bahri waxaa barbaraha u dhaliyay Jaamacada Gadareif laacibkooda duula Ee garabka uga ciyaara Xasan Xiimaye oo gool qurux badan ku aamusiyay taagerayasha Bahri, sidaa ayaana lagu kala maray qeybtii hore ee ciyaarta.
Qeybtii 2-aad Ee ciyaarta laacibka Bahri Garyare ayaa mar kale hogaanka u dhiibay Bahri kadib gool cajiib ah oo ka dhaliyay Gaderif, intaa wixii ka dambeyay waxa ziyaaday xamaasadii ciyaarta oo laga dheehan karay sawaxanka taagerayasha.
Gadareif ayaa gool dag dag ah la timi oo uu u dhaliyay Xasan Xiimaye kana dhigay ciyaarta 2-2, iyadoo aysan daqiiqado badan ka soo wareegan goolkisi 2-aad Xasan wuxu dhaliyay seddexleydii ugu horeesay koobka isago dhulka ku jiiday daafacyada Jaamacada Bahri.
Ayadoo ay Gaderif weli hogaanka hayso ayuu Xasan Xiimaye ku sii ziyaadiyay madax xanuunka kooxda mataleesay Jaamacada Bahri kadib markii uu dhaliyay goolkisii 4-aad isago dhinac maray boortaha Reer Bahri halkana ku dhaliyay Super Hatrick.
Dhamadkii Qeybta 2-aad Ee ciyaarta ayuu arbitaha ka dhigay rigooro kooxda Gadareif oo dillinta ganaaxa ku galay qalad kadib markii daafacoda uu gacanta ku qaatay kubada, waxana rigoorihi gool u badalay Saacid oo goolkisi 2-aad halkaa ku dhaliyay, sidaa ayuuna ku soo gabgaboobay kulankii daah furka koobka jaamacadaha sudan oo ay guusha ku raacday Gadareif oo 4-3 ku garaacday Jaamacada Bahri.
Koobkan oo ah koob is arag oo kooxdi laga badiyaa ay harayso, waxa kulankiisa 2-aad ku balansan Jaamacadaha Neelain iyo Jaamacada Africa oo ciyaari doona habeenimada axada 27-ka bishan haduu Eebe Idmo.
W/Q: Abdirahman Mohamed Hersi “Xidiga Maanka”.
EPL: Liverpool oo lafaha ka dhuuxday Arsenal +SAWIRRO
GOOGOOSKA: SSC Napoli vs Atalanta 3-1 (Napoli oo markale badisay)